‘म राजनीतिक रङका आधारमा काम गर्दिनँ’::Nepaloutline.com
भरतपुर महानगरपालिकाकी नगरप्रमुख रेनु दाहाल देशभरिका पाँच महानगरमा एक्ली महिला प्रमुख हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनी नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा निर्वाचित दाहाल माओवादी र एमाले एकतापछि बनेको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । महानगरमा दाहाललाई प्रतिपक्षी नै नभएको नगरप्रमुखका रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । महानगर प्रमुख दाहालसँग उहाँको चौध महिने कार्यकालमा भएका विकासका काम र हाल सञ्चालित विकासका गतिविधिसँग केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ :
म त्यो कुरातिर जान्नँ । किन उपमेयर आउनुभएन भन्नेतर्फ पनि म लाग्दिनँ । यति भन्छु, समीक्षा बैठक उपमेयरकै सहमतिमा आयोजना गरिएको हो तर उहाँलाई पछि कुन कारण प¥यो बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने भन्ने मलाई थाहा भएन । तर, त्यसपछि सबै कुरा एकआपसमा सरसल्लाहमै अगाडि बढिरहेका छन् । अहिले राजनीतिक रङका आधारमा कुनै विवाद छैन ।
तपाईंले आफ्ना चुनावी अभियानका बेला जनतामाझ मेट्रो रेल, नारायणी र राप्तीको तटबन्ध, स्मार्ट सिटी जस्ता योजनाका कुरा उठाउनुभएको थियो, ती योजना कहाँ पु¥याउनुभयो ?
हो, चुनावी घोषणापत्रमा महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने कुरा, नारायणी र राप्तीको तटबन्ध, स्मार्ट सिटी मात्रै हैन भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै महानगरभित्र आफ्नै नगर अस्पताल बनाउने कुरा थिए र भरतपुरमा विकास हुँदै गरेको मेडिकल सिटीलाई व्यवस्थापन गर्दै यसको विकास गरिने भनिएको थियो । पर्यटन विकासलाई टेवा पु¥याउन भ्यु टावर, आधुनिक मनोरञ्जन पार्क, हरेक वडामा बालबगैँचा र उद्यान निर्माणमा जोड दिइने कुरा उठाएका थियौँ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलो सर्त सुशासन कायम गर्नु हो । यसका लागि हामीले पारदर्शी खर्च प्रणाली र मितव्ययी प्रशासन अवलम्बन गरेका छाँै । राजस्व चुहावटलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अपनाएका छौँ । २९ वटै वडामा ई–नेटवर्किङको विकासनिर्माणका कामका लागि विज्ञहरूको संयन्त्र बनाएर अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गरेका छौँ । सेवाग्राहीहरूलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि सहयोगी कक्ष बनाएका छौँ ।
कति पर्ला र के होला विश्वकै महँगा रक्सीमा ? यी हुन ५ महंगा रक्सी
अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका ८० प्रतिशत व्यवसायीहरू पीडामा छन्
अबको प्रधानमन्त्री मै हुँ : प्रचण्डको विशेष अन्तर्वाता (भिडियोसहित)